एजेन्सी- चुम्बनलाई प्रेमसंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। माया र प्रणयसंग जोडिने चुम्बनको छुट्टै महत्व हुने गर्छ। चुम्बनलाई प्रेमलाई छुट्टै स्थानमा पुर्याउने कदमको रुपमा धेरैले हर्ने गर्छन्। चुम्बन हरेक आवस्थामा फरक-फरक रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। भिन्न तरिकाबाट प्रस्तुत गरिने भएता पनि मुलभूत रुपमा चुम्बन प्रेमको प्रतिकनै बन्ने गर्छ।
महिला साथै युवतीहरु आफ्नो प्रेमी होस् अथवा श्रीमानले चुम्बन गर्दा छुट्टै अनुभूत गर्ने गर्छन्। यदि आफ्नो प्रेमीले निधारमा चुम्बन गरेको खण्डमा महिलाहरु आफूलाई सौभाग्य महसुस गर्ने गर्छन्। यसरी प्रेमीले चुम्बन गर्दा आफ्नो सम्बन्ध गहिरो भएको महिलाहरुले अनुभूत गर्ने गर्छन्।
यस्तै प्रेमीले प्रेमिकालाई दिएको औंठी भएको औंलालाई चुम्बन गर्दा पनि महिलाहरु अत्याधिक खुशी हुने गर्छन्। यस्तो गर्नाले महिलाहरु आफ्नो सम्बन्ध प्रति आफ्नो प्रेमी खुसि रहेको बुझ्छन्। यसरी चुम्बन गर्दा महिलाहरु आफ्नो सम्बन्ध प्रति प्रेमीको लगाभलाई बुझ्ने गर्छन्।
यस्तै यौन सम्बन्धको समयमा भने चुम्बनलाई लिएर महिलाहरुको फरक अनुभव हुने गर्छ। संवेदनशील स्थानमा चुम्बन गर्नाले महिलाहरु उत्तेजित हुने गर्छन्। ओठमा चुम्बान गर्दा महिलाहरु छुट्टै अनुभव गर्छन् भने प्रेमी प्रति आफ्नो लिप्तता व्यक्त गर्न आफू पनि अग्रसर हुने गर्छन्। यस्तै यौन सम्बन्धको समयमा संवेदनशील स्थानको अलावा आफ्नो प्रेमीले गर्दनको चुम्बन गरेको धेरैनै मन पराउने तथ्यहरुले देखाएको छ।
महिलाहरु सपनामा प्राय यी व्यक्तिसँग सेक्स गरेको देख्छन् ! किन हुन्छ यस्तो ? हेर्नुहोस् !